Izindaba - Sigcwele ukuzethemba embonini yokubhala yesikhathi esizayo
I-Hole Punch Eyodwa
I-Hole Punch emibili
Sigcwele ukuzethemba embonini yokubhala yesikhathi esizayo
Ekupheleni kwe-17th China International Stationery and Gifts Fair (Ningbo Stationery Fair) ngoJulayi nonyaka, sabona ukuthi njengombukiso wokuqala omkhulu wezinto zokubhala emhlabeni selokhu kwaqubuka lo bhubhane, idatha yemibukiso ehlukahlukene isafinyelelwe ukuphakama okusha. Ngasikhathi sinye, umcimbi wephule imingcele yesikhathi nendawo, futhi izinkampani zakwamanye amazwe ezindaweni eziningana emhlabeni azizange zishiye amakhaya azo "amafu" ayoxoxisana nababonisi. Masigcwaliswe ngolwazi mayelana nentuthuko yesikhathi esizayo yomkhakha wokubhala.
Njengomkhosi waminyaka yonke wokubhala owawuqala phansi ngemuva kwalolu bhubhane, umbukiso wafinyelela irekhodi eliphakeme kakhulu futhi waqopha irekhodi elisha lomkhakha wokubhala esifundeni sase-Asia-Pacific. Kumamitha-skwele angama-35,000 esewonke amahholo ombukiso, esewonke amabhizinisi angama-1107 azobamba iqhaza kulo mbukiso, amisa amadokodo ayi-1,728, izivakashi ezingama-19,498.
Abakhangisi bebevela kakhulu ezifundazweni nasemadolobheni angu-18 okubalwa kuwo iZhejiang, iGuangdong, iJiangsu, iShanghai, iShandong ne-Anhui, kanti amabhizinisi avela eWenzhou, eDuan, eJinhua nakwezinye izindawo ezinhlanu ezikhiqiza izinto zokubhala esifundazweni saseZhejiang abambe iqhaza kulo mbukiso. Amabhizinisi e-Ningbo abalwa ngama-21% engqikithi. E-yiwu, Qingyuan, Tonglu, Ninghai nakwezinye izindawo zokubhala ezikhiqizwayo, uhulumeni wasekhaya uzohola ekuhleleni nasekuhlanganiseni amabhizinisi endaweni engaphansi kwegunya lawo ukuze abambe iqhaza kulo mbukiso ngamaqembu.
Ababonisi baletha amashumi ezinkulungwane zemikhiqizo emisha, ehlanganisa ihhovisi ledeskithophu, amathuluzi okubhala, izinto zobuciko, ukuhlinzekwa kwabafundi, izimpahla zehhovisi, izipho, ukukhiqizwa kwezinto zokubhala kanye nemishini yokucubungula kanye nezingxenye, ezibandakanya zonke izigaba zomkhakha wezinto zokubhala kanye nochungechunge lwezimboni ezihamba phezulu nangaphansi.
Ngenxa yomthelela walolu bhubhane, izindawo eziningi zokubhala zihambele lo mbukiso ndawonye. Kulo mbukiso wokubhala we-ningbo, ngaphezu kwamaqembu avela ku-Ninghai, Cixi, Wenzhou, Yiwu, Fenshui naseWuyi, iQingyuan Bureau of Commerce kanye neQingyuan Pencil Industry Association ihlele amabhizinisi angama-25 afana neHongxing, Jiuling, Meimei neQianyi ukuze babambe iqhaza kulo mbukiso okokuqala. Idolobha laseTonglu Fenshui, elaziwa ngokuthi “idolobha okwenziwa ngalo ipeni lamaShayina”, ibhizinisi elibhalwe ipeni eliphakeme kakhulu “iTiantuan” nalo livele kulo mbukiso wokubhala, ukuze kudluliswe umgomo womkhiqizo othi “ake ipeni lomuntu ngamunye”.
Imboni yokubonisa yaseNingbo nayo ingeyokuqala "efwini". Ihholo lombukiso lesikwele lisungulwe emnyuziyamu ukuze kubanjwe ukufaniswa kwangempela kwe-inthanethi kwempahla. Abakhangisi abaningi babuthana efwini, kanti abanye ababonisi bafuna izindlela ezintsha ngokuthi "basakaze bukhoma" nangokuthi "bafake izimpahla". I-Ningbo Stationery embukisweni isikhungo umise inethiwekhi ekhethekile line and Zoom Igumbi lenkomfa yevidiyo ukubona ukuxhumana ubuso nobuso phakathi kwabathengi baphesheya namabhizinisi asekhaya. Imininingwane eqoqwe khona lapho ikhombisa ukuthi abathengi baphesheya kwezilwandle abangama-239 abavela emazweni angama-44 nezifunda emhlabeni bazobamba i-video docking nabaphakeli ababambe iqhaza ngo-2007.
Isikhathi Iposi: Nov-16-2020
Sigcwele ukuzethemba esikhathini esizayo ...
26 China China Yiwu International C encane ...
2020 Ninghai Kumile Fair / the Chin 9 ...
Joyina Incwajana Yethu